Isiguquli sokuzihlukanisa: yonke into ekufuneka uyazi | Ihardware yasimahla
Isolation transformer: yonke into ekufuneka uyazi
UIsake | | Izinto zombane
Phakathi kwamacandelo e-elektroniki ahlalutywayo kwakukho toroidal inguqu, ukongeza siye sajongana nolu hlobo lweziqalelo xa siphawula malunga nokubonelela ngombane, iintlobo zangoku, njl. Ngoku kukujika kolunye uhlobo olungaqhelekanga kakhulu lwe-transformer, efana ne isiguquli sokwahlula.
Unako yazi ukuba yintoni na, yintoni na, ukungafani kunye nezinye iindidi ze-transformers, kunye nendlela yokukhetha enye yazo kwiiprojekthi zakho ezizayo.
1 Yintoni isiguquli sokwahlula?
1.2 Izinto eziluncedo kwi-transformer yodwa
1.3 izicelo zokhuseleko transformer
2 Apho ukuthenga i-transformer yodwa
Yintoni isiguquli sokwahlula?
Los iziguquli zombane Banepropathi yokudlulisa amandla phakathi kwee-conductors zabo ezimbini nangaphezulu ngaphandle kokuba kubekho uxhulumaniso lomzimba phakathi kwabo. Ekuphela kwento engaphandle iya kuba yi-auto-transformers. Ukuvelisa olu dluliselo lusekwe kwi-electromagnetic induction, kwaye ngokubanzi ukujika okungaphezulu okanye okuncinci kusetyenziswa kwii-winding zabo ukuguqula i-voltage.
Enkosi ngaloo nto ukwahlukana phakathi kweeseketheEkubeni enye iqhagamshelwe kwi-winging ephambili kunye nenye kwi-winging yesibini, kungekhona nje ukuguqulwa komqondiso, banokusebenza njengento yokhuseleko.
Enyanisweni, xa sibhekisela kwi-transformer yokhuseleko okanye i-transformer yodwa, sijongene nabaguquli abathile kakhulu 1: 1 umlinganiselo, oko kukuthi, kunye nokuphefumula okufanayo kwiikhoyili zayo ezimbini (inani elifanayo lokujika), ngoko ayiguquli i-voltage. Imveliso yakho iya kulingana negalelo lakho.
Kungenxa yoko le nto zisetyenziswa zokusebenza zokhuseleko, xa ufuna ukuhambisa amandla ombane ukusuka kwesinye isiphaluka ukuya kwenye kwaye ufuna ukuqhawula zombini.
Ngaphakathi kwee-transformers zokhuseleko, okanye ukuzihlukanisa, unokufumana Iindidi ezimbini ezisisiseko:
Isigaba esinye: inesikrini esifakwe phakathi kojiko oluphambili kunye nolwesibini, oluqhagamshelwe kwi-terminal egqunyiweyo. Ukongezelela, iibrakethi zokunyuka zifakwe kwi-core transformer. Ezi zikwanazo nezinzwa zobushushu ezakhelweyo, kwaye zinenqanaba lengxolo ephantsi. Isebenzisa isigaba kunye nokungathathi hlangothi, kunye ne-input voltages ye-220V okanye i-230V ngokubanzi.
Triphasic: ikwanayo ne-architecture elingana nesigaba esisodwa, kodwa kule meko yofakelo lwezigaba ezintathu. Oko kukuthi, isigaba esisodwa siqhelekileyo kwizicelo zasekhaya, ngelixa ukufakwa kwezigaba ezintathu kufumaneka ngokubanzi kwishishini okanye kwintengiso. Olu fakelo alunayo isigaba esisodwa kunye nekhebula elingathathi hlangothi, kodwa lihlulwe libe yimisinga emithathu etshintshanayo okanye izigaba zokwahlula amandla ofakelo. Kule meko, bahlala bexhasa i-380 okanye i-480V.
Izinto eziluncedo kwi-transformer yodwa
Ukuba ne-transformer yodwa kunokuba nothotho lwe ezintle kufakelo lombane, olunje:
Ziyimfuneko ekukhuseleni imisinga yombane, umzekelo, ukukhusela ukutshatyalaliswa kombane.
Baqinisekisa ukufumaneka kobonelelo lombane ukukhusela ukufakela. Zilungele ukufakela ukufumaneka okuphezulu.
Ilahleko zayo ziphantsi kunezinye iintlobo ze-transformers.
Ziyilwe kwaye zenziwa ngezaleko ezininzi ze-insulation eyomeleziweyo, enika ukomelela okukhulu kunye nokhuseleko.
izicelo zokhuseleko transformer
Ukuba uyazibuza malunga nezicelo zolu hlobo lwe ukuzimela yedwa okanye i-transformer yokhuseleko, zikhona kubuninzi bofakelo lombane kunye nezixhobo. Njengokuba:
Ukukhusela abasebenzi kwishock yombane. Zombini kumaziko emizi-mveliso nakumaziko oluntu asebenzisa isigaba sesithathu kunye nesigaba esinye.
Kwimithombo ethile yamandla yezixhobo ezibuthathaka.
Oomatshini abacekethekileyo begumbi lokusebenza.
Izixhobo zaselabhoratri kunye nezixhobo ezithile zokubonelela ngombane kwiindibano zocweyo zombane.
Njengesihluzo sengxolo yombane, ukwahlula igalelo kwimveliso.
Inyaniso kukuba iinketho zihluke kakhulu.
Apho ukuthenga i-transformer yodwa
Ukuba ujonge i isiguquli sokuzihlukanisa ngexabiso elihle, unokhetho oluhlukeneyo, phakathi kwabo, enye yezona zidumileyo kukukhangela kwi-platform ye-Amazon yokuthengisa. Umzekelo, nazi ezinye iingcebiso:
Akozon iziguquli ezikhethekileyo zezicelo zomsindo. Kukho iziqwenga ezili-10, kwaye ziyi-1: 1.
I-ZCX yodwa i-transformer 1: 1, ngegalelo le-220v kunye ne-220v yemveliso. Ixhasa ukuya kuthi ga kwi-10W.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Izixhobo zasimahla » Izinto zombane » Isolation transformer: yonke into ekufuneka uyazi
I-Raspberry Pi Zero 2W: eyona intsha kwiRaspberry Pi
2n3904: into ekufuneka uyazi malunga nale transistor